'भारतको होइन, नेपालको चिन्ता गर्नुस्’ - BBC News नेपाली
'भारतको होइन, नेपालको चिन्ता गर्नुस्’
26 नोभेम्बर 2015
Image caption भारतीय राजदूत रन्जीत रेले भारतले नेपालमा कुनै नाकाबन्दी नलगाएको बताए
बीबीसी नेपाली सेवासंग विशेष कुराकानी गर्दै नेपालकालागि भारतीय राजदूत रन्जीत रेले भारतले नेपालमा घोषित वा अघोषित कुनैपनि खाले नाकाबन्दी लगाएको भन्ने आरोपहरुलाई सोझै अस्वीकार गरे। उनले नेपालीहरुलाई भारतको हैन, आफ्नै मुलुकको बारेमा चिन्ता गर्न सुझाव पनि दिए। राजदूत रेसंग रबीन्द्र मिश्रले गरेको कुराकानीको संपादित अंश:
भारतीय राजदूतसंगको अन्तर्वार्ता (नेपालीमा)
भारतीय राजदूतसंगको अन्तर्वार्ता (अंग्रेजीमा)
झापा, भैरहवा, बाँके, कैलाली, कञ्चनपुर। त्यहाँ विरोध प्रदर्शन वा अवरोध छैनन्। तर त्यहाँबाट पनि आएका छैनन्?
हो किनकि आपूर्तिको ६० देखि ७० प्रतिशत त रक्सौल वीरगञ्ज नाकाबाट हुन्छ नि त। त्यसैले के गर्नुपर्छ भने - जुन हामीले विशेषगरी औषधि आयातकर्ताहरुलाई पनि भनेका छौं - तपाईंहरुले आइन्दा आफ्ना सामान रक्सौलबाट नझिकाउनुस्। अन्य खुला रहेका सीमाचौकी बाट आफ्ना सामान लेराउनुस्।
तर त्यहाँबाट ट्रकको बाटो परिवर्तन गरी जोगबनी नाकाबाट ल्याउन खोज्दा समेत अनुमति दिइएन नि? तिनले औषधि बोकेका थिए…
रक्सौल बाहेकका अन्य नाका सञ्चालनमा रहेको अनि औषधिका गाडी अन्य नाकाबाट पठाइएको भनेर तपाईंले भन्दै गर्दा नेपाली दृष्टिकोणबाट यो एकदमै अनौठो लाग्छ। किनकि पत्रकारहरु त्यहाँ पुगेका छन्, उनीहरुले स्थानीय भारतीय अधिकारीहरुसंग कुराकानी गरेका छन्। उनीहरुका अनुसार भारतीय अधिकारीहरुले माथिको आदेश भन्ने गरेका छन् - ट्रक जान नदिन माथिको आदेश। बेला बेला केही ट्रक छाडिएका छन्। अब प्रश्न के उठ्छ भने यदि केही ट्रकका ड्राइभरलाई काठमाण्डौं आउन असुरक्षा छैन भने, अन्य ट्रक किन आउन सक्दैनन्?
भारत र नेपाल बीच खुला सीमाना छ। जब नेपालका कुनै भागमा समस्या हुन्छ भने त्यसले प्रष्ट रुपमा भारतमा असर हुन्छ
हेर्नुस्। यो यति सरल विषय होइन। पाँच हजारभन्दा धेरै ट्रकहरु लाइनमा छन्। सामान्यत: के गरिन्छ भने तिनलाई पालैपालो पठाइन्छ। पालोमा आलुको ट्रक वा इन्धनको ट्रक जे पनि हुन सक्छ। हामीले जानाजान कुनैलाई रोक्न खोजेको होइन।
भारतको संविधान जारी हुँदा ६५ प्रतिशतले त्यसको पक्षमा मतदान गरेका थिए। नेपालको संविधान जारी हुँदा ८५ प्रतिशत जनप्रतिनिधिले पक्षमा मतदान गरेका छन्। त्यसो हुँदा समेत भारतले यो संविधानलाई केवल जानकारीमा लिएको भनेर टिप्पणी ग-यो। त्यसैले पनि धेरै नेपालीले भारतलाई दोष दिइरहेका छन्?
यो कतै भारत विफल भएको हो वा होइन भन्ने विषय होइन। तपाईं त नेपालमा के भइरहेको छ भन्नेप्रति चिन्तित हुनुपर्ने हो। भारत ठूलो देश छ र उसले आफ्नो हेरचाह गर्न सक्छ। मलाई लाग्छ तपाईंको निम्ति महत्वपूर्ण त नेपालमा के हुन लाग्यो भन्ने हुनुपर्छ। भारतलाई बिर्सिदिनुस्।
धेरै नेपाली विश्लेषकहरु भन्छन्, भारत नेपालसंग के चाहन्छ भन्ने बुझ्नै सकिएन…
अनि तपाईंलाई लाग्छ नेपालका अधिकांश जनताले तपाईंको यो कुरा पत्याउलान्?
कतिपय भारतीय विश्लेषकले यो भारतको महागल्ती भएको र विदेश नीतिको पूर्ण विफलता भएको भनेका छन्?
मैले त्यसो भनेको छैन। जुनसुकै सम्बन्धमा पनि दुई पक्षकै जिम्मेदारी हुन्छ। मलाई लाग्छ महत्वपूर्ण के छ, भने वर्तमान समस्याबाट पार पाएपछि हामीले नेपाल भारत सम्बन्धमाथि एकचोटी फेरि ध्यान पुर्याउनुपर्छ - नेपाल भारतसंग कस्तो सम्बन्ध चाहन्छ भन्ने बारे। किनकि हामीलाई हाल देखिएका भारत विरोधी भावनाले निकै चिन्तित बनाएको छ।
हेर्नुस्, तपाईं एकदमै धेरै भावनात्मक किसिमका शब्दहरु जस्तो कि 'पूर्ण' र 'नष्ट' भन्ने प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ।